Kedu ezigbo ịgba igwe ike? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Mee ka ikike ịgba ígwè dịkwuo elu - otu esi ejikwa
Mee ka ikike ịgba ígwè dịkwuo elu - otu esi ejikwa
Kedu ezigbo ịgba igwe ike?
Ọtụtụ prondị na-agba ígwèmepụta ihe dị ka 200 ruo 300 watts nankezin'ime oge njegharị elekere anọ. N'aka nke ọzọ, onye na-agba ịnyịnya egwuregwu nwere ike ịkwado mmiri a n'oge klaasị nkeji iri anọ na ise ma ọ bụ elekere elekere.Ọnwa Isii 28. 2015 g.
Olee ikike onye na-agba ígwè ga-ewepụta?
Kedu ka m ga-esi sie ike ịgba ịnyịnya ígwè?
N'oge aigweagbụrụ, onye nọ n'ọkwá dị eluonye na-agba ígwè nwere ike ịmịpụtanso 400 watts nke n'ibuikeihe karịrị otu awa na obere mkpụmkpụ gbawaa karịa okpukpu abụọ nke - 1000 ka 1100 watts; Ugba ịnyịnya ígwè nke oge a nwere ihe karịrị arụmọrụ 95%.
Nke siri ike, nke a nwere ike ịpụta ihe dị iche iche na ndị ọgba aghara dị iche iche, ọ nwere ike ịpụta ihe dị mma, ọ nwere ike isi ike, ma ọ bụ na ọ nwere ike ịpụta inwe oke quads ma debe ha n'ụzọ ọ dị ka ọ fụrụ gị Ihe Atọ Na-eme Ka I Nwee IkeSweetspot Mgbalị Ugbu a Ndị gị nke nọ na GcM mgbe niile ga-anụrịrị okwu a tupu anyị niile anabata ya, ike onye ị nwere ike ịkwagide? Hour na ọkara ma ọ bụrụ na a chụpụrụ gị n'ezie, ma ọ bụ tinye ya n'ihe gbasara arụmọrụ. Ọ bụ ihe dị ka 85 ruo 90% nke ọnụ ụzọ lactate gị, ọ bụkwa pasent nke oke obi gị. Yabụ banyere otu ị si eme ọzụzụ ntụpọ dị ụtọ ebe ahụ? E nwere ụzọ dị iche iche ị ga - esi jiri 20 rụọ ọrụ nkeji oge ma ọ bụ mụta usoro ngwa ngwa karịa ogologo njem.
Nke ahụ bụ ngọngọ siri ike elekere na ọkara na-egbochi awa Tarmac na ọkara siri ike. Dịka ego agbakwunyere maka anyị bụ ndị na-eji mita ike, anyị na-anwa imeri arụmọrụ ma ọ bụ nkezi ka anyị bụrụ ezigbo ngwaọrụ iji hụ na ị n'ezie na-enwe ọganihu, ma ọ bụrụ na ịnweghị mita ike ị chọghị ichegbu onwe gị, ọ ka nwere ike ịdị oke mkpa. Naanị iburu ihe ole na ole n'uche ka ị wee buru ụzọ zere ike ọkụ niile, yabụ enweghị ịgba ọsọ n’elu mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ ma ịchọrọ otu ụzọ na-adịkarị larịị, yabụ enweghị okporo ụzọ, ihe anyị na-achọ. Ọ bụ nkwado siri ike ọ bụghị n'ọtụtụ bouncing, mee ya mgbe ọ masịrị gị, ọ dị mma, yabụ ugbu a, anyị na-arụ ọrụ na ikike anyị agaghị echefu oge.
NoBit dabere n'omume ebumpụta ụwa gị, n'ezie, ndị ebe mkpuchi dị ịtụnanya nwere ike ọ gaghị agọzi iji eriri ngwa ngwa nke onye na-agba ọsọ dị ọcha. Mana n'agbanyeghị onye ị bụ, a ka nwere ike imezi ya, ị nwere ike ị nweta ihe karịa nke ahụ na-eme ihe ị nwere na ihe bụ ọzụzụ nke neuromuscular nke na-enyere aka ịmepụta ụzọ ntanetị nke ga - enyere gị aka ịchọta ụdọ akwara ọzọ. Ọ bụrụ na ịmalite na otu maka ihe ọ bụla ị nwere ike ịme nnukwu uru na izu ole na ole mbụ, mana ị ga - enweta ala ma ọ bụ n'ihi na ị mepụtara ụzọ gị muscular iji nweta ọtụtụ ihe ị nwere, mgbe ahụ ị ga - arụ ọrụ ogologo oge karịa n'ezie ewu ihe muscle akwara.
Ọfọn, na mgbakwunye bụ na ọ bụrụgodị na ị na-agba ịnyịnya ígwè gị mgbe niile, akwara akwara gị niile nwere ike ọ gaghị eweghachi ya, ị ga-azụkwa ha nnukwu ngwa ngwa dịka nnukwu mgbanaka gị ma gbadaa na casset na dịka ọsịsọ as possible Sprint to speed Mgbe ahụ dị nnọọ zuru ike ma na-ekpeghachi oge mgbe gị nnọkọ na-mere. Nwere ike ịlaghachi n'ụlọ n'ihi na ọ bụ oge dị mkpirikpi na ị nwere ike ime ya mgbe ị na-ala ọrụ ma ọ bụ ọbụna n'isi ụtụtụ ma ọ bụ na mgbede iji gbakwunye njem ọzọ n'ụbọchị ahụ, ma kpachara anya. Ọ na-agwụ ike n'ezie, yabụ ma eleghị anya ị ga-enwe mmetụta dị ka mkpofu zuru oke mgbe ị na-apụ? Ruo n'ókè ụfọdụ, ike ịgba ịnyịnya ígwè na-adabere n'ike nke uche, na-enye ụfọdụ ndị na-agba ịnyịnya iwepụ ifufe na mmiri ozuzo ma merie isii nke agbụrụ anyị na-agba ịnyịnya agha ebe ndị ọzọ na-ada n'ụgbọ ala ndị otu ha, na-enye ụfọdụ ndị na-agba ịnyịnya ohere ikpuchi anya dị anya maka ọtụtụ awa na ụbọchị dị ka mee ya, mana ruo n’ókè ọ dabere na gị onwe gị nke pụrụ ịbụ ihe ịtụnanya dị irè.
O doro anya na ị ga-ama otu esi elekwasị anya na mgbu iji mee ka ihe yie ihe ka njọ, ime ka ihe mgbu gị ma ọ bụ ahụ erughị ala gị bụrụ nke dị mma ma bụrụ nke dị otu a, na omume ziri ezi ị ga-achọpụta na ị nwere ike ijigide ọsọ ọsọ nke ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta na-adịghị mma, yabụ ị nwere ike ịchọta onwe gị ka ị na-aga ngwa ngwa na ịrịgo ahụ, mana ọ bụrụ na ijide onwe gị, mgbe ahụ ọ kwụsịrị ugbu a, nke ahụ na-ewe omume, yabụ kedu ka ị si eme nke ahụ? Ọ dị mma, ilekwasị anya n'ihe mgbaru ọsọ gị nwere ike ịdị irè dị ka ọ na-elekwasị anya na nsonaazụ dị mma. Ma mgbe ahụ enwere ihe ọzọ nke ahụ dị egwu. Controlchịkwa iku ume gị ga-enyere gị aka ịnweta usoro ka mma iji bụrụ onye na-agba ịnyịnya siri ike, mgbe ahụ, ị ​​ga-azụlite igwe gị nke ikuku, ị ga-emeziwanye arụmọrụ gị kachasị elu, n'agbanyeghị ma ị na-ewere onwe gị dị ka onye na-egbu egbu ma ọ bụ na ọ bụghị, ma Mgbe ahụ ihe niile ị ga - eme bụ ime ka onwe gị kwenye na ị dị ike. Nke a nwere ike bụrụ ngwa ọrụ kachasị ike anyị nwere.Ma ị chọghị ileghara ọzụzụ gị anya wee pịa ebe ahụ ma ị ga - enweta vidiyo ka esi emeziwanye. Ọrụ gị kachasị elu ma ọ bụ n'okpuru ebe a ma mee ka ị banye n'otu iji zụọ maka ịgba ọsọ ọsọ ọsọ tupu ị gawa maka ndị a, gbaa mbọ banye na gcN ịme ya.
Naanị pịa ụwa
na-agba igwe iji ghara ibu ibu
Ihe75-nkena-achịna-ekwu na n'ime otu izu ọzụzụ, ọ dịkarịa ala75pasent nke maili gị (ma ọ bụ oge) kwesịrị ịdị ma ọ bụ n'okpuru75pasent nke oke obi gị (MHR).
Cadence ma ọ bụ cadence yiri ka ọ na-agbanwe dabere na ihe ndị na-agba ịnyịnya pro ugbu a na-eme onwe ha, yabụ ka anyị leghachi anya n'oge LanceArmstrong, nke ọma, ọ mere ka nnukwu ọhaneze mara amara na ịrịgo, mana ọ bụrụ na anyị elee anya n'otu n'ime ndị asọmpi ya kachasị nso, ee Norick, anyi meriri na Tour deFrance nke gara aga merie Lance Armstrong ala gbadara agbago ebe a ma tinye ugwu na akwa gia ya mere o di iche ma ya buru na ha abuo abuo na-ese okwu na uwa nke inyinya o yiri ka ha abuo aghugho, yabụ na ha nwere ike kagbuo ibe anyị n'agbanyeghị na anyị rutere ịnwale ihe maka onwe anyị, n'ihi na sayensị nke oge a yiri ka ọ na-atụ aro na nhọpụta nke onwe gị bụ nke kachasị arụ ọrụ, ihe ọ bụla ị họọrọ maka ijide nke kachasị mma nwere ike bụrụ nke kachasị mma, nke bụ ụzọ karịrị ihe ọ O doro anya na ọ ga - ahọrọ mgbe ọ meere ya ihe dị mma Ben ga - adị jụụ n'ihi na ọ ga - akwọ ụgbọala na 80 rpm, nke bụ ihe ọ ga - eme na ịrị elu ugwu. Nye ya ntakịrị ihe mgbochi, anyị ga-emesị nwee ike ịnagide 60 RPM, nke bụ n'ezie ihe dị n'okpuru ihe ọ ga-eme site na oxygen ọ na-eji maka nke ọ bụla, ọbara ọbara ya nwekwara ndị a Obi anya elere na nsonaazụ ya nyochaa mgbe ọ gwụchara, ọ dị mma, anyị nọ n'etiti nke mbụ n'ime ule ndị a The Heike, nke ahụ bụ otu akụkụ, anaghị enwe mmetụta ebumpụta ụwa m maara, mana kedu ka ị mere? bido na 100rpm bu ihe di egwu ugbua mgbe nkeji ole na ole gara aga m hie ụra ọ bụ karịa ọgbaghara mgbochi ị maara na echere m ka anyị wepụ oche ahụ mana enweghị m ike, agaghị m ahọrọ akụrụngwa a maka gburugburu ebe a, ọ bụ ọ bụghị na ihe ọjọọ 10 sekọnd na-eje ije ugbu a n'akụkụ 2 1 10 nkeji na-eme nri n'akụkụ mere ya zuru 10 nkeji na 100 rpm ya mere ugbu a nwere a ọbara mkpokọta anyị na-aga na-eku ume nyochaa ma anyị agaghị na-eme niile nke nsonaazụ ruo mgbe anyị nwetara ya, emere m ule abụọ ndị ọzọ ahụ, m ga-anọ obere ezumike n'etiti Shh ọ na-ezu ike ugbu a, ọ ga-adị njikere n'oge na-adịghị anya Ọ dị mma, anyị nwere nke abụọ a nke oge 10 nkeji anyị malitere na oge a Psy na-aga n'ihi ụjọ ọ nweghị ọnụọgụ iji lee Keynes abụọ a họọrọ onwe m nke m nwere ike ịgwa bụ 90, yabụ ee, ọ bụ 90, anyị chere na ọ nwere ike ịbụ 80 mana ọ dị ka ọ na-enwe obi ụtọ ịbụ onye dị mma, ọ bụ naanị 10 na-akụ nwayọ karịa nke anyị mere oge ikpeazụ ma onye na-esote abata na 6050 sekọnd a sink donethree abụọ otu laa Nri sy amalitela ugbu a nkeji nke atọ na nke ikpeazụ nke 10 dị ka ị nwere ike ịhụ na obere ala mgbe gear na-egosi na ọ bụ na 6% ojuju na ọdịda iri abụọ maka iri isii na otu na-ahụ anyị, n'ihi ya, ọ na-ele anya n'ụzọ yiri nke ọma Yanor ugbu a.Ọ ga - ahụ etu ọ dị ya n'oge ole na ole.
Anyị nọ ugbu a n'etiti ule ikpeazụ 10 a. You nọ ihe dịka 61 rpm na ule a, nke dị mma 25% n'okpuru ihe Kate gị họọrọ nwere, yana kedu ka ọ dị, ọ bụ ihe ijuanya Li Ọ na-adị m ike na m na-anwa nyochaa mmetụta ahụ, m na-eku ume na-otu, m na-enwekwaghị mgbu na ụkwụ m, ọ bụ naanị obere ala m na-ahụ obi gị ọnụego iyi ala na oge karịa ndị ọzọ abụọ etiti oge otú Oh nnọọ na ọ dị mma otú ahụ ka m na-eche ma ị maara. Anaghị m eji ya mana akwara m nwayọ nwayọ, echere m na m nọ n'ọnọdụ anyị ebe m na-eji eriri emegharị emegharị, ọ bụghị m ka m ga-agba ọsọ, nke ọma, ị nwere nkeji anọ iji bilie na nkeji anyị na-elele ọnụọgụ obi m dere na Garmin maka oge ikpeazụ nke nyocha ọ bụla nke 10 ọ bụla, ahapụla m abụọ ka m mere n'oge kwesịrị ekwesị iji rụọ ọrụ ụfọdụ.
Nke mbu bu 100 RPM Simon onodu obi ya bu 177, mana nke abuo nke ahoputara onwe ya ihe biara na 90 RPM bu 172 ma obu ihe di ka 60 RPM 172, mana Jonathan biko gwa anyi ihe esi na ya pụta echiche nke Votwo na ule ndị ọzọ bụkwa Vo2 dị mma n'etiti ule Thr, ma ihe niile 100 RPM dị ntakịrị, gburugburu 49 milliliters kwa kilogram, na mgbe 60 U / min na ndị a họọrọ ụfọdụ bụ ndị mara mma nke ukwuu 50 mils kwa kilogram dị nnọọ nta karịa nke ahụ nke mere na e nwere fractional dị iche ma na a isiokwu banyere oge ahụ anyị na-enweghị ike n'ezie ikwu na ọ bụ ịrịba na na na otú ọ dịghị ihe dị oke mkpa banyere lactic acid wdg. Obughi ihe ijuanya, ikekwe na vo2 ahụ yiri nke ahụ, lactate ahụ na-egosi ụfọdụ esemokwu dị iche iche nke mere na lactate na narị rpm dị elu karịa atọ niile na nke ahụ bụ eg acha ọcha ebe asatọ ijeri ntụpọ ojii n'ahụ na nke abụọ nke abụọ ka na iri isii na iri isii ọ bụ otu isi atọ millimoles na mgbe ahụ na iri itoolu otu isi isii e nwere ezigbo nnukwu ihe dị iche otú ihe karịrị 1 millimolar abụọ dị iche iche atọ dị iche iche cadence dị mma nke bụ a Nnukwu ihe dị iche, ọ dị mma ka anyị gaa gwa sy onye na-eteta ebe ahụ wee hụ ka obi dị ya maka oge atọ dị iche iche ị nụrụ na peeji nke nsonaazụ tupu anyị agafee ya.
belt na-agagharị igwe kwụ otu ebe
Ọ bara uru na-ekwusi ike ma ọ bụrụ na ị hụbeghị isiokwu ole na ole, anyị maara na ndị a abụghị isiokwu sayensị na-ahụ maka iwu amaara m na ị ga-emeghachi ha iji nweta ezigbo nsonaazụ, mana nsonaazụ ahụ dị ezigbo mma ma eleghị anya ọ bụghị ihe niile anyị tụrụ anya ya, nke ahụ bụ ọzọ lactate dị ala na 60rpm 1.3 fọrọ nke nta ka ọkara ihe ị nwere na 100rpm gịnị ka ị chere na ọ dị egwu, ọ bụghị? ọ bụrụ na agara m kpuru ìsì ma ị jụọ m otu ajụjụ ahụ, agara m asị na enweghị mgbagha 100 rpm bụ ihe kachasị sie ike m nwere mmetụta anụ ahụ na-enweghị ahụ iru ala 60 bụ nhọrọ maka m90 ọ dị m ka 60 chere a enwekwu obi iru ala n'ihi ike m tinyere na pedal, mana enweghị m mmasị na-arụsi ọrụ ike ka ị hụ na ị maara m n'onwe m na Pedaling na ike nwayọ nwayọ dị mma, ee echere m na ọ dịkarịa ala site n'ihe m ' Agụla maka afọ ole na ole gara aga, ọ dịkwa mma ịmara na ikike dị elu ị na-arụ, nke ka elu nke ọma kwesịrị ịbụ Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị lelee Chris Hoy na onye isi ya nke mepụtara nnukwu ike na egwu, ọ na-atụgharị ihe dị elu ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-amu amu ọ bụ 200 watts, n'adịghị ka Bradley Wiggins nwere 480 watts. N'ezie, ị nweghị ike i copyomi usoro iheomume gị n'ihi na nke ahụ abụghị ụzọ kachasị dị mma isi mee ya kpamkpam, echekwara m na ọ dịkwa mma ịmara na ikike gị ga-agbanwe dabere na ntụgharị uche ahụ.
Yabụ mgbe ị nọ n'okporo ụzọ dị larịị, ihu igwe gị ga-adị elu karịa mgbe ịlaghachi azụ, yabụ echere m na anyị nwere ike iche na ọ bara uru ịnwale ụzọ dị iche iche. Ọ bụghị n'ihi na ịchọrọ ndapụta dị iche maka ọnọdụ dị iche iche yana mgbe imirikiti ọzụzụ gị dị ogologo na ị nwere ike ịta ahụhụ n'okporo ụzọ dị larịị, belụsọ na ị na-agbatị ọsọ ọsọ maka GCN Doscience isiokwu hụ pịa ọhụrụ na ee, mee ka nna gị mụrụ anya
Ndi FTP nke 200 di nma?
FTPna watts maka ụmụ nwanyị
Enwere obere mkpebi maka data a n'ihi na enwere ọtụtụ ụmụ nwoke karịa ụmụ nwanyị ndị na-eji nyocha Cycling. 46% nke ndị mmadụ nwere otuFTPn'okpuruOgba 200W. 44% nke ndị mmadụ nwereFTPnke 210W ma ọ bụ karịa. 10% nke ndị mmadụ nwere otuFTPn'etitiOgba 200W na 210W.June 7. Ọkt 2018
Ndi 400 watts otutu ike igwe?
Mkpa ọkụonye na-agba ígwèonye nwere ike wepụta raw eluwattagenọmba ga-aga aotutuỌsọ ọsọ. Isiokwu na-azọrọ na a kwesịrị ekwesị kwesịrị ekwesịonye na-agba ígwènwere ike ịkọwapụta 250 ruo 300wattsdị ka nkezi maka ule 20 FTP (ọnụ ụzọ ntinye ọrụ) nyocha, ebe uru na-abụkarị nkezi400 watts.
4 watts kwa kilogram dị mma?
N'ihi ya, ọ bụ na ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na klọb nwere ihe mgbaru ọsọ nke inwe ike iji nweta ikike mbata arụmọrụ (FTP) nke 4W /n'arọ. Agbanyeghị, 4W /n'arọka dị mma karịa ọtụtụ ndị ọgba bọọlụ larịị, ma na-atụgharị onye ọ bụla n'ihe ndina ya. N'ihi ya, ọ bụ aukwuebumnuche iji kwụsị.Eprel 15 2020
arọ ọnwụ nri ụtụtụ
Cycgba ígwè na-arụ ike?
Cygba ígwèbụ ezigbo ihe omume dị elu nawusiiheobi ilu, nke bu oru maka mbido uzo nke ala nkeịgba ígwèa na - arụ ọrụ ọ bụla ma na - arụ ọrụ mgbe ọ bụla ị na - aga ije.Eprel 7 2020
17 mph ọ bụ ezigbo ịgba ọsọ ọsọ?
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ị nweta nkeziososonke 15Mphna njem otu elekere. Aezigbo ọsọmaka onye mbido bu 10Mph, ma ị ga-enwe ike iru 15Mphmara mma ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ịmalite ịzụ oge ọ bụla, ị nwere ike nweta ihe ruru 18Mph, ma ọzụzụ mgbe niile nwere ike ime ka ị ruo 22Mph.
Kedu iwu nọmba 1 maka igwe?
Mgbe opekempenọmbankeanyịnya igweonye kwesiri inwe bu nke ato, nke ziri ezinọmbabụ n +1. 1, ebee ka nnọmbankeanyịnya igwenwere ugbu a. Enwere ike degharịa akụkụ a s -1. 1, ebe s bunọmbankeanyịnya igwenwere nke ga - ebute nkewa site na onye òtù ọlụlụ gị.Ọkt 25 2018
Afọ ole ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-arị elu?
Kedu ihe bụ omenalaelu afọiche maka ọkachamarandị na-agba ígwè? Dị ka football (bọl maka ndị America), ọtụtụ ndị egwuregwuelun’agbata afọ 26-31 (ma e wezụga ndị na-eche nche bụ ndịeluna 30-35).
ịgba ígwè chafing
Kedu ụzọ kachasị mma iji nwekwuo ike na igwe kwụ otu ebe?
N'ezie, ọ nwere ike ịnwe mmetụta na-adịghị mma na, ọ bụrụ na emere ya ihe ọjọọ, nwedịrị ike ịbawanye mmerụ ahụ. Akwara gị kwesịrị ịkwado na 80-gbakwunyere oge kwa min na igwe kwụ otu ebe - nwala imeghari nke ahụ na igwe squat. Thezọ kachasị mma iji melite ike ịgba ígwè dị na igwe kwụ otu ebe, na - ejikọ ọsọ ụkwụ na ike ụkwụ.
Kedu otu esi eme ka ike ụkwụ dị elu na igwe kwụ otu ebe?
Ike mgbawa bụ ụzọ dị mma iji mee ka ụkwụ gị dị ike na ntachi obi, nke bụ ikike ị ga-eji ihe eji ebu ibu na-aga n'ihu (nke bụ, ọgbọ ike).
Kedu ụzọ kachasị mma iji nwekwuo ike dị elu?
Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ imeziwanye ọnụ ụzọ gị, VO2 max, ike kachasị elu ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-arụ ọrụ, ịkwado ọzụzụ bụ ihe dị mkpa iji nwee ihe ịga nke ọma. Nke a pụtara; n'ibelata ọzụzụ adịghị oge maka ọzụzụ… igbochi ọrịa… na ime atụmatụ izere oghere dị na ọzụzụ ọzụzụ gị